Aza manonona foana ny anaran'i Jehôvah
"Aza manonona foana ny anaran'i Jehôvah Andriamanitrao; fa tsy hataon'i Jehôvah ho tsy manan-tsiny izay manonona foana ny anarany" Eks. 20:7.
Omena antsika ny antony nanomezana io didy io: "Aza mianiana akory na amin'ny lanitra, fa seza fiandrianan'Andriamanitra izany; na amin'ny tany, fa fitoeran-tongony izany; na amin'i Jerosalema, fa tananan'ny Mpanjaka lehibe izany. Aza mianiana amin'ny lohanao; fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-bolo iray akory aza hianao". Avy amin' Andriamanitra ny zava-drehetra. Tsy misy na inona na inona ananantsika ka tsy noraisintsika. Ary mihoatra noho izany, tsy misy na inona na inona ananantsika ka tsy novidin'i Kristy ho antsika tamin'ny rany. — TMB, 102
Tsy tokony hotenenina mihitsy ny tenim-pirehetam-po, satria toy ny fianianana izany eo imason'Andriamanitra sy eo imason'ny anjely masina. — AFL 439
Tsy ny fianianan-tsy to sy ny fiozonana mahazatra ny maro ihany no melohin'ity didy ity. Melohiny koa ny fanononam-poana tsy misy antony ny anaran'Andriamanitra, sy ny tsy firaharahana ny hevitra mahatahotra raketiny koa. Manetry voninahitra an'Andriamanitra ny famerenana foana ny anarany amin'ny tsy fiheverana eo amin'ny resaka tsy mahomby atao, na ny maka Azy ho vavolombelon'ny zavatra tsy mendrika. "Masina sy mahatahotra ny anarany". Tokony handinika tsara ny voninahitra sy ny fahadiovana ary ny fahamasinan'Andriamanitra ny olona tsirairay, mba ho vonton'ny fiheverana ny toetra manan-kaja ananany ny fo. Koa amim-panajana fatratra ihany no hanononany ny anaran'Andriamanitra. —PP, 306,307
Tsy olona tahaka antsika no tokony hankalazaina sy hotompoina. Andriamanitra, Ilay hany Andriamanitra marina sy velona, Izy irery ihany no mendrika hankalazaina sy hotompoina. Araka ny fampianaran'ny Soratra Masina dia tsy fanajana an'Andriamanitra ny fiantsoana ny mpitandrina hoe: 'ray masina". Tsy misy olombelona mendrika hantsoina toy izany. Andriamanitra irery no mendrika izany mba hiavahany amin'ny zava-manan'aina hafa rehetra (...) "Masina sy mahatahotra ny anarany". Tsy manome voninahitra an'Andriamanitra isika raha mampiasa izany fiantsoana izany amin'izay tsy mendrika azy (...) Ny Ray sy ny Zanaka irery ihany no tokony hasandratra. — YI, 07 Jolay 1898.